I-Web Screen Scraping: Iingcebiso ezifanelekileyo ezivela kwi-Semalt
Namhlanje, idatha ingaba yinto yakho ebaluleke kakhulu. Ngaloo ndlela, akusoze kube yinto efanelekileyo ukuyivumela ukuba idibene ezandleni zabakhuphiswano bakho. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukukhusela oku ngenxa yokukhangela isikrini. Le yindlela eyenzelwe iminyaka ukukhishwa kwedatha kumaphepha ewebhu.
Le ndlela ibeka iingxaki ezibalulekileyo kwiqumrhu. Okokuqala, idatha ingasetyenziselwa ukufumana inzuzo phezu kweshishini mhlawumbi ngokunyuka kwamaxabiso kunye nokufumana ulwazi ngemveliso. Kwakhona, ukuba iqhubeka ngokuqhubekayo, ubuchule bungaphinda bugawule ukusebenza kwewebhusayithi.
Ngokuqhelekileyo, ukukhutshwa kwesikrini yimbono eyadalwa yiprogram yokuqulunqa kwexesha lokugqibela kwiminyaka embalwa edlulileyo. Yinkqubo yenkqubo echonga ulwazi oluvela kwizikrini eziye zenzelwe ukujonga abantu ngokubanzi. Inkqubo yenza ngathi iyimntu kwaye ifunda idatha, iqokelela ulwazi oluxabisekileyo kwaye luyilungiselele ukugcina.
Ubuchule buye buguqukela kakhulu kwiminyaka, ngokukodwa ngokuveliswa kwabakhweli bewebhu..Yashintsha phambili nangakumbi nophuhliso lwe-e-retail screen scraping, ngokomzekelo, iiwebhusayithi ezifanisa intengiso. Ezi website zenza iiprogram ezithe tyelela i-e-retail ezidumiweyo ngokukhawuleza ukuze zithengise amaxabiso amanani kunye nolwazi lokufumaneka kwimveliso okanye inkonzo. Le datha igcinwa kwisiseko sedatha kwaye isetyenziswe ukubonelela ukuhlaziywa okuthelekiswayo kwe-e-retail landscape.
Ukukhutshwa kwesikrini sokukhuphisana kunemiphumo eyahlukileyo kwiimpawu ze-IT zenkqantosi kwinto nje nje ngomnye wendlela yokungafuneki. Uphando olutsha luye lwafakazela ukuba ubuncinane ubuncinane be-61% yazo zonke izithuthi zenziwe ngebhodi. Ezi zibalo zidla izixhobo ezibalulekileyo kunye ne-bandwidth ejoliswe kubasebenzisi bokwenene bewebhu abangabangela ukwanda kwinqanaba lomsebenzi wabathengi bamanani.
Ukukhwa kwesikrini kuqhubeke ixesha elide. Nangona kunjalo, kungekudala nje ukuba amaxhoba alo mkhuba aqala ukusabela. Abanye baye bathi izenzo zezoshishino ezingenzi kakuhle kunye nokuphulwa kwelungelo lobunikazi ngexesha ngokuphambene neefisi ezenza ukuzithengisa zizikhusele ngokwenza inkululeko yolwazi.
Uninzi lwabanikazi bewebhusayithi baye bathatha imigaqo-nkqubo yokusetyenziswa kumaphepha abo ewebhu abenqabela ukuhlutha. Ngelishwa, abanako ukunyanzelisa le nkqubo, kwaye ngoko ingxaki ibonakala ingahambi nangoko nangoko.
Kwiminyaka edlulileyo, i-eBay ifake i-API evumela ukuba abaculi abalungileyo bakwazi ukufikelela kwedatha yakho. Nangona kunjalo, ayigcini ukuvunwa kwezinto ezinobungozi ezisetyenziselwa inzuzo yokukhuphisana. Ukukhusela kwangempela kunokufumaneka ngokusebenzisa iteknoloji engavimbela iindwendwe ezingabantu kwiwebhusayithi yakho. Oku kuvumela abasebenzisi bokwenene ukuba bafikelele kwiwebhusayithi yakho ngeli xesha bevalela abaqhwayi ukuba bangabangela umonakalo.
Ezinye iindlela ezisebenzayo apho umntu angakwazi ukulwa nokukhangela kwesikrini ngokusebenzisa iindlela ezifana nobuchule be-IP yolwazi, ukufumanisa umthombo we-IP, ukuhlaziywa kwempendulo yokuphendula, ukuhlaziywa kokuziphatha kwexesha, nokuhlolwa kwezinga le-geo ukunyanzeliswa.